Muuri News Network » SAWIRO: Gaas oo isbitaalka Addis Ababa ku booqday Askartii P/L ee ku dhaawacmay…
SAWIRO: Gaas oo isbitaalka Addis Ababa ku booqday Askartii P/L ee ku dhaawacmay…
Apr 22, 2016 - Comments off
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Safar shaqo u jooga magaalada Addis Ababa ee caasimadda Waddanka Ethiopia ayaa maanta booqday ciidamadii Puntland ee ku dhaawacmay dagaalkii Puntland iyo Al-shabaab, kuwaas lagu dabiibayo cusbitallo ku yaalla magaalada Addis Abab.
Booqashada ayaa Madaxweynaha waxaa ku wehelinayey Wasiirka Dekedaha, gaadiidka Badda iyo ladagaallanka Burcad badeedka Cabdullaahi Jaamac Saalax, Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Cabdiweli Xirsi Indho-guran iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid isla markaana waxay soo booqdeen dhammaan dhaawacyadii oo xaaladdoodu aad u wanaagsan tahay.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mid-mid ula sheekaystay dhaawacyadii si’uu si hoose ugu ogaado xaaladohooda guud ahaan, isla markaana waxa uu amray in waddanka India loo qaado dhaawacyada qaybtood si baadhitaan dheeraad ah loogu sameeyo.
Booqashada kadib Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo waftigiisa ayaa waxaa qado sharaf soo dhoweyn ah ugu sameeyey magaalada Addis Ababa Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa.
Kulanka qado sharafta ah ee ay wada qaateen Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia kadib waxay wada qaadeen kulan gaar ah oo diiradda lagu saarayey xiriirka u dhexeeya Dawladda Puntland iyo Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Sidoo kale waxaa kulanka looga wada hadlay halka uu marayo Kastamka Tuur-dibi oo la filayo in dhowaan la furo si Puntland iyo Ethiopia ay u yeeshaan xariir ganacsi oo ka wanaagsan ka hadda jira.